Indalo Noma Ukuziphendukela Kwemvelo?—Kungani Kufanele Ukholelwe Endalweni? Intsha Iyabuza
ULIMI Hindi (Roman) ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine Isi-Umbundu IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMalta IsiMongolia IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPersia IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTonga IsiTsonga IsiTurkey IsiTurkmen IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu ULimi Lwezandla Lwase-Italy
“Uma ukholelwa endalweni, abantu bangase bacabange ukuthi uyisiphukuphuku, bathi ubambelele ezimfundisweni zobuntwana owazifundiswa abazali bakho, noma bathi ukhohliswe yinkolo.”​—UJeanette.
Ingabe nawe uzizwa njengoJeanette? Uma kunjalo, ungase uzithole usukungabaza ukukholelwa kwakho endalweni. Vele akekho umuntu othanda ukubhekwa njengongazi lutho. Yini engasiza?
Izizathu zokungavumelani nale nkolelo
Cabanga ngezinkolelo zakho
Amathuluzi okukusiza uhlole ubufakazi
1. Uma ukholelwa endalweni, abantu bayocabanga ukuthi awuvumelani nesayensi.
“Uthisha wami wathi ukukholelwa endalweni, yinto abantu abayenza lapho bevilapha ukuthola incazelo yokuthi umhlaba usebenza kanjani.”​—UMaria.
Okufanele ukwazi: Labo abasho kanjalo abawazi amaqiniso. Ososayensi abadumile abanjengoGalileo no-Isaac Newton, babekholelwa kuMdali. Inkolelo yabo yayingangqubuzani nothando lwabo ngesayensi. Ngokufanayo, abanye ososayensi namuhla ababoni kungqubuzana phakathi kwesayensi nokukholelwa endalweni.
Zama lokhu: Bhala amagama athi “uchaza ngokholo lwakhe” (kanye nezimpawu zengcaphuno) ebhokisini lokufuna elitholakala engxenyeni ethi UMTAPO WEZINCWADI ukuze uthole izibonelo zalabo abasemkhakheni wezokwelapha nowesayensi abayamukelayo indaba yendalo. Phawula ukuthi yini eyabasiza ukuba bafinyelele kuleso siphetho.
Iphuzu elibalulekile: Ukukholelwa endalweni akukwenzi umuntu omelene nesayensi. Empeleni, ukufunda okwengeziwe ngezinto zemvelo, kungaqinisa ukukholelwa kwakho endalweni.​—Roma 1:​20.
2. Uma ukholelwa kulokho okushiwo yiBhayibheli ngendalo, abantu bayocabanga ukuthi ungumuntu oshisekela inkolo ngokweqile.
“Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukukholelwa endalweni kuyihlaya. Banomuzwa wokuthi ukulandisa okukuGenesise kumane nje kuyinganekwane.”​—UJasmine.
Okufanele ukwazi: Ngokuvamile abantu banemibono eyiphutha ngalokho okushiwo yiBhayibheli ngendalo. Ngokwesibonelo, abanye abathi bakholelwa endalweni, bathi umhlaba udalwe muva nje, noma bathi izinto eziphilayo zadalwa ngezinsuku eziyisithupha zamahora angu-24. Kule mibono, awukho osekelwa yiBhayibheli.
UGenesise 1:1 uyibeka kalula le ndaba, uthi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba.” Lokhu akungqubuzani nobufakazi besayensi bokuthi sekuyizigidigidi zeminyaka umhlaba ukhona.
Igama elithi “usuku” njengoba lisetshenziswe kuGenesise, lingabhekisela enkathini ende yesikhathi. Empeleni, kuGenesise 2:4 igama elithi “usuku,” libhekisela kuzo zonke izinsuku eziyisithupha zokudala.
Iphuzu elibalulekile: Ukulandisa kweBhayibheli ngendalo kuyavumelana namaqiniso esayensi.
Ukukholelwa endalweni akudingi ube “nokholo olungenasisekelo.” Kunalokho, kusekelwe ezizathwini ezinengqondo. Cabanga ngalokhu:
Konke oye wakubona ekuphileni, kukufundise ukuthi lapho kunomklamo khona, kukhona nomklami. Lapho ubona ikhamera, indiza noma indlu, uphetha kufanele ngokuthi ukhona owakuklama. Kungani kufanele uwulahle lowo mqondo ophusile uma usucabanga ngeso lomuntu, ngenyoni endiza esibhakabhakeni, noma ngoMhlaba esiphila kuwo?
Ongacabanga ngakho: Ngokuvamile, onjiniyela balingisa imiklamo abasuke beyibone ezintweni zemvelo ukuze bathuthukise lokho abasuke bekusungulile, futhi ngokufanelekile bafuna abanye bayiqaphele imisebenzi yabo. Ingabe kunengqondo ukuqaphela umklami ongumuntu kanye nomsebenzi wakhe, kodwa sihluleke ukuqaphela uMdali kanye nemiklamo yaKhe esezingeni eliphezulu?
Ingabe kunengqondo ukucabanga ukuthi ibhanoyi laklanywa kodwa inyoni yazivelela?
Ungakuqinisa ukuzimisela kwakho ukukholelwa endalweni ngokuhlola ubufakazi obutholakala emvelweni.
Zama lokhu: Bhala amagama athi “ingabe kwaklanywa” (kanye nezimpawu zengcaphuno) ebhokisini lokufuna elitholakala engxenyeni ethi UMTAPO WEZINCWADI. Khetha izihloko ozithandayo ezitholakala kuyi-Phaphama! ngaphansi kochungechunge oluthi “Ingabe Kwaklanywa?” Esihlokweni ngasinye, thola ukuthi yini evelele ngaleyo nto yemvelo okuxoxwa ngayo. Kukuqinisekisa kanjani ukuthi ukhona uMklami?
Yimba ujule: Sebenzisa lezi zincwajana ezilandelayo ukuze uhlole ubufakazi obengeziwe bendalo.
Umhlaba ubekwe endaweni ekahle kakhulu futhi ukuhlomele ukusekela izinto eziphilayo.​—Bheka amakhasi 4-​10.
Izibonelo zomklamo ziyatholakala endalweni.​—Bheka amakhasi 11-​17.
Ukulandisa kweBhayibheli ngendalo okukuGenesise kuyavumelana nesayensi.​—Bheka amakhasi 24-​28.
Ukuphila kwakungeke kuvele kuqhamuke entweni engaphili.​—Bheka amakhasi 4-7.
Izinto eziphilayo ziyinkimbinkimbi kakhulu ukuba zazingavele zizivelele nje.​—Bheka amakhasi 8-​12.
Izakhi zofuzo zikwazi ukugcina imininingwane eminingi ukwedlula zonke izinto zobuchwepheshe zanamuhla.​—Bheka amakhasi 13-​21.
Zonke izinto eziphilayo azivelanga entweni eyodwa. Umlando wezinsalela ufakazela ukuthi izilwane ezinhlobonhlobo zavela ngezinhlobo zazo, hhayi ukuthi zathuthuka kancane kancane zisuka ohlotsheni oluthile.​—Bheka amakhasi 22-​29.
“Imvelo ingenze ngaqiniseka nakakhulu ukuthi uNkulunkulu ukhona, kusukela ezilwaneni ezilapha emhlabeni kuya emkhathini ogcwele izinkanyezi kanye nokuhleleka okukhona kuwo.”—UThomas.
“Lapho ngifunda ekilasini lesayensi ngabo bonke ubunkimbinkimbi bezitshalo, bezilwane nobomzimba womuntu, ngavele ngakhexa! Angingabazi ukuthi lona umsebenzi woMdali. Ngicabanga ukuthi kufanele ube ‘nokholo lokuthatheka’ ukuze ukholelwe ukuthi izinto zazivelela, azidalwanga.”​—UHannah.
“Ngikuthanda kakhulu ukufunda isihloko esithi ‘Ingabe Kwaklanywa?’ kumagazini i-‘Phaphama!’ Singinikeza ubufakazi bokuthi akunakwenzeka ukuthi izinto zazivelela. Kuwubuwula ukucabanga ukuthi into enhle njengovemvane noma umzwilili yavele yaba khona ngengozi.”​—UTalia.
Intsha Ixoxa Ngokukholelwa KuNkulunkulu
Kule video eyimizuzu emithathu, abasebasha bachaza ukuthi yini ebaqinisekisayo ukuthi ukhona uMdali.
Thumelela Thumelela Indalo Noma Ukuziphendukela Kwemvelo?​—Ingxenye 3: Kungani Kufanele Ukholelwe Endalweni?